दाम्पत्य सुख विथोल्ने यो तत्व – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ८ कार्तिक २०७५, बिहीबार १३:४९
यस किसिमको सम्बन्ध कायम गर्न के कुरा चाहिएला ?
होइन, तपाईं भित्रकै कुरुप तत्वले गर्दा । त्यो तत्व हो, अविश्वास ।
श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जबसम्म विश्वास हुन्छ, तबसम्म माया हुन्छ, एकअर्का बीच प्रेम हुन्छ, सहकार्य हुन्छ ।
के हुन्छ होला त्यसको असर वैवाहिक जीवनमा ?
विभिन्न अनुसन्धानहरुले जनाए अनुसार कसैमाथि शंका गर्नु खासै ठूलो समस्या हैन । तर कुनै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको भने पहिलो खुड्किलो बन्न सक्छ ।
यस्ता शंकाको समयमै उपचार नगरेको खण्डमा यस प्रति मानिसको विश्वास बढ्न थाल्छ । जसले गर्दा आˆनै साथीप्रति अविश्वास पैदा हुनसक्छ ।
नौलो परिवेशका कारण
जब हामी नयाँ सम्बन्धमा प्रवेश गछौ, तब मनमा आशा, आकांक्षाका साथै केही कुरालाई लिएर आशंका पनि पैदा हुन्छ । उक्त आशंकालाई समयमै शान्त नपारेको खण्डमा त्यसले कुनै पनि शंकाको रुप लिन सक्छ ।
सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा मनमा कुनै डर बसेमा त्यसले पनि शंका जन्माउन सक्छ ।
आफैमा हिनताबोध भएमा
आफूमा हिनताबोध भएमा पनि त्यसले जीवनमा विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्छ । र हनिताबोध हुनका लागि आफूमा कुनै कमी कमजोरी भएकै हुनुपर्छ । जब मानिसमा कुनै कमी कमजोरी हुन्छ, तब ऊ आफूलाई लिएर हिनताबोध गर्न थाल्छ, रआफ्नो साथीमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्न थाल्छ । अन्तत त्यही शंकाका उसले आˆनो जीवनलाई त तहसनहस गर्छ नै, आफ्नो सम्बन्ध समेत विर्गाछ ।
भनिन्छ, एक पटक विजुलीले लागेको कुकुर अगुल्टा देखि पनि डराउँछ । मानव जीवनमा पनि यो कुरा निकै हदसम्म लागू हुन्छ । विशेषगरी एक पटक धोका खाएको मान्छेलाई सजिलै अरु माथि विश्वास गर्न निकै क ठिन हुन्छ । जसले गर्दा उसको मनमा शंका उपशंकाले जन्म लिएर जिवन नै वर्वाद पार्न सक्छ ।
के हुन्छ त शंका गरेमा ?
भनिन्छ , शंकाले नै लंका जलाउँछ । शंकालाई समयमै रोकथाम नगरेको खण्डमा यसले श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई नै तहसनहस पार्न सक्छ । घरपरिवार विर्गान सक्छ ।
किनकी हरेक पटक शंका गर्ने मानिस जीवनमा कुनै पनि सम्बन्धबाट सन्तुष्ट रहन सक्दैन । त्यसैले, शंकालाई एउटा निश्चित दायरा भित्र राख्न जरुरी छ ।
श्रीमान श्रीमतिबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पनि कहिलेकाँही एक अर्काबीच माया दर्शाउन जरुरी छ । किनकी श्रीमान श्रीमतिबीचको सम्बन्ध भनेकै मायामा टिकेको हुन्छ । जब श्रीमान श्रीमतीबीच माया नै छैन भने उनीहरुबीच विश्वास हुने कुरै हुँदैन । त्यसैले एक अर्का बीच विश्वास कायम गर्न पनि माया दर्शाउन जरुरी छ ।
केही प्रश्नको बोझबाट आफू तथा आˆनो साथीलाई पनि टाढा राख्ने प्रयास गरौ । विशेषगरी तिमी अहिले कहाँ छौ, कोसित छौ, तिमी मलाई माया त गर्छौ , तिमी मसित केही कुरा लुकाईरहेको त छैनौ ? जस्ता प्रश्नले पनि श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
स्वतन्त्रता पूर्वक बाच्न दिने
सम्बन्धमा एक अर्कालाई स्वतन्त्रत रुपमा छोड्न जरुरी छ । यसको लागि केही समय आफूलाई दिएर साथीलाई पनि केही समयका लागि एक्लै छोड्न सकिन्छ । किनकी प्रत्येक मानिसका लागि स्वतन्त्रता जरुरी छ । र, जब सम्म सम्बन्धमा स्वतन्त्रता रहन्छ, विश्वास रहन्छ, तब सम्म उक्त सम्बन्धमा शंकाको लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहदैन ।
एक अर्का प्रति विश्वासको वातावरण बनाउने
शंका गर्नु प्रत्येक मानिसको स्वभाव हो । तर जतिपटक शंका गरिन्छ,त्यति नै पटक आˆनो साथी प्रति विश्वास कायम राख्न जरुरी छ । किनकी विश्वास नै यस्तो जाडी हो जसले सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुका साथै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ । र, एक अर्का बस्च विश्वास जताउन क्वालिटी टाइम व्यतित गर्न जरुरी छ ।
व्यविचार गर्नबाट बच्ने
कतिपय मानिस यस्ता हुन्छ, जो सानो कुरालाई लिएर पनि तर्कबितर्क गर्नतिर लाग्छ । तिललाई पहाड बनाउँछन् । यस्ता कुर्तकले आफूलाई हानीबाहेक केही गर्दैन । त्यसैले यस्ता अनावश्यक विचार गर्नबाट बच्नु पर्छ ।
खाली दिमाग नबस्ने
अन्यथा दिमागका कारण मनमा विभिन्न शंका उपशंका जन्मिन सक्छ । जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि विशेषज्ञहरुको सल्लाह आवश्यक छ ।